Smartphone Ongororo Xiaomi Mi A1 - Secure Choice
Smartphone Review Xiaomi Mi A1
Yakave imwe yekutengesa kubudirira mukatikati memaganhu.
Uye isu tiri pano kuratidza chikonzero.
Sezvenguva dzose, tinotarisa kubhokisi sekutanga kwemutambo, ibhokisi rakakodzerwa nefoni iyi.
Pamusoro pe smartphone tinogona kusimbisa kunaka, uye izvo zvinotiyeuchidza zvishoma zvepakutanga muenzaniso wemuchina weapuro.
Paunenge uri muruoko rwako iwe une manzwiro emhando, izvo zvakanaka kwazvo.
O smartphone ine muviri wesimbi uye girazi ndiyo Gorilla Glass 3, ine zviduku zviduku zve 2,5D zvinoita kuti zvive zvakanyanya kunaka.
Pakati pegirazi uye simbi unogona kuona kuti ine purasitiki yakaonda, sechimiro chekudzivirira kana chikawa.
Uye maviri mamwe mapurasitiki maduku mumutumbi wesimbi, kuti atore mhizha yeWi-Fi pamwe chete netambo.
Iko kurema hutsi hwe165 huri mukati meuremu hunorema mu-5,5 inch smartphones apo muviri unoitwa nesimbi.
Zvinoshamisa kuti ukuru huri 7,3 mm, hwakatetepa, kuenzaniswa nemuenzaniso nemumwe wemuenzaniso wemuchina, Redmi Note 4 iyo inopfuura 8 mm thickness, inouya chete kuratidza kuti Xiaomi yave ichichenjerera pakuvakwa mumidziyo iyi yevheji yepamusoro.
Cherechedza kuti iyi IPS LTPS chinyorwa chinobatsira kuratidza kusarudzwa kwakanakisisa kudarika kuratidzwa ne IPS chete.
Nhamba yepikisiki inobva ku403 kusvika paHD HD yakagadziriswa (1920 × 1080) iyo inobatsira kuti uratidze kuratidzwa kwehutano hwemichina.
Ingave isina micheche yakajeka, asi inokodzera zvakakwana kuva iyo yepakati.
Kushandiswa kwesikrini mu 5,5 inches ni 70.1%, ine zvimwe zvishoma zvisingatambudzi.
Processor / GPU / RAM
Kuva i-smartphone yekupedzisira pamusika (September 2017), inogona kunge iine purogiramu yakakwirira.
Asi Xiaomi vaifarira bheji musi Qualcomm Snapdragon 625, saizvozvo kuti redmi Note 4 uye 5 redmi Plus, akasarudza processor aigona kuponesa zvakawanda bhatiri.
Uyu hutatu-core processor runomhanya 2 Ghz.
IGPU ndiyo Adreno 506, iyo inotungamirira zvakanaka mumagariro akawanda, mitambo uye maitiro.
A RAM ndeye 4 GB, iyo inobatsira kuva nezviverengero zvekushanda kumashure, uye izvozvo hazvingaitiki kunonoka kana kunyange kunonoka, izvo zvinoita kuti zvive zvakanakisisa mune izvi, zvekusava nekutya pamusoro pemvura.
Pane maBhaibheri maviri pane iyi smartphone inoshandura yakasiyana uye yakasiyana-siyana yekuchengetedza, 32 GB version uye 64 GB nzvimbo.
Iyo yatinenge tichirondedzera ndeye ye64 GB iyo chaizvo ine 58,24 GB.
Iko kuchengetedza kunogona kuwedzerwa ne microSD kadi kusvika ku 128 GB.
Zvisinei, kushandisa microSD kadi isu tichazosiya wechipiri SIM card slot (iyo inonzi nano-sim hybrid).
Kuzvionera aigona kugara kuna 2 mazuva mwero kushandiswa, kuti bhatiri riri 3080 naRaama zvinogona mwoyo vaya uchishandisa Xiaomi zvokushandisa nokuti staked kunyanya nepakati siyana pamwe mabhatiri pakati 4000 uye 4100 naKedhema (kuzvionera kwave nguva dzose yakasimba pfungwa yacho muchiso).
Iine biometric sensor (fingerprint sensor) kumashure, iyo inowanzove yakajairika mune zvakawanda zvigadzirwa.
Mumwe anonakidza zvakare, ndiko kuti michini Switch, kana munhu achida kushandisa kuva murayiro kuti TV, sezvo yave kuonekwa mune dzimwe kwemashoko muchiso.
Iyo inouya yakagadzirirwa GPS, inopindura zvakanaka.
Kusiyana azvino redmi 5 Plus womuenzaniso, anouya chete USB Type-C asi vasingatsanyi vachizvitakudza, asi izvi zvinogona kutakura 90% muna 1h30.
Kutumira data nedzimwe kifaa kana kubatana nemamwe majaira tine Bluetooth version 4.2.
Kutinhira kwemidziyo yakanaka, haunzwi kunzwa kukanganiswa kwezwi.
Icho chakanaka hurukuro kwechigadziro chiri mubvunzo.
Mushanduro yaAntutu yakasvika pane zvishoma zveP75.000 zvakanga zvatofanirwa kutarisirwa zvichitsanangurwa izvo zvavazvo.
Ndiwo mudziyo wokutanga pasina Xiaomi MIUI ezvinhu, Mi A1 ine Android One, yakachena Android uye kuti achapa chakasimba chekuchengetedzwa reserved mumakore anouya 2.
Inouya nemamwe maitiro e Google iyo tsika pane Android One.
Izvi zvinouya neUnited Nougat (7.1) asi zvatove zvadzorerwa kuAreo Oreo (8.0) kuburikidza neOTA.
Mutambo - Unoda Kachimbidzika: Hapana Zvikwereti
Mutambo wemarudzi akatevera zvakakwana pasina kunonoka kana kukundikana, wakabvumirwa zvachose.
Tora - Critical Ops
Akanga akanaka chaizvo uye takafara chaizvo nemutambo wacho, nguva inonakidza chaizvo.
Sezvo tagara tichiedza mamwe mimwe mitambo yakadai seFree Fire, Asphalt 8, pakati pezvimwe zvakaenda zvakakwana.
Iyo ikamera huru ndeyomukati 12 mp kamera, imwe ine f / 2.2 kuzarura uye imwe inotanga f / 2.6.
Zvichienderana nemifananidzo yatinoratidza, iwe uchaona hutano hwavo.
Sezvaunogona kuona iyo ine unhu huri nani, zvisinei kuti hahuna kusvika pedyo nepamusoro pezera, asi inoita zvakanaka chaizvo.
Munzvimbo dzakaderera-mhepo inoramba iine chivi chemafoni e-Xiaomi, ayo anonzi Achilles tsoka.
Kunyange zvakadaro, yakavandudza zvishoma, zvichienderana nedzimwe nyeredzi-mienzaniso yekambani.
Tinotarisira kuti mienzaniso inotevera mumutambo uyu inotanga kutarisa zviri nani pane izvi.
Tine zvinhu zvakasiyana siyana zvakadai seHDR, panoramic photo, manual mode, pakati pevamwe.
Vhidhiyo yekurekodha inogona kunyora ku2160 pa 30 fps.
The kamera pamberi ndiye 5 MP uye selfies vachava zvakakwana, uye iwe unogona kushandisa mufananidzo kana kunaka somuenzaniso kuti selfie yakawanda nezvaanoda yedu.
Smartphone inofanirwa kune avo vanoda kufanana, chimwe chinhu chisingashaiwi mudziyo uyu.
Chigadzirwa chinonzwisiswa sechinyanya kubudirira mumusika, kunyanya nokuti iri Android One panzvimbo yeshandiso inoshandiswa ne Xiaomi kana MIUI.
Kana iwe uchida smartphone, yakagadzikana, yakanaka, yakanaka, uye ine tsanangudzo yakakwana yekutsigira maitiro akawanda nemitambo iyi inogona kunge yakanaka uye neAroid yakachena.
Icho chine urombo hwakanaka mufananidzo, asi nechiedza hachikuvhiringidzi.
Iyi smartphone ichiri kutsigirwa zvakananga kubva kuGoogle, iyo inogona kubatsira kugara ichivandudzwa kwenguva yakareba.
Zvakakodzera here? Hongu, hongu!
Imwe yepamusoro-kati yemakironi emafoni emazuva ano.
Ongororo Xiaomi Smartphone Ongororo Redmi Note 5
Ongororo Xiaomi Redmi 5 Plus Smartphone Review
Xiaomi Yangu 2S Mix Smartphone Review
 10 Best Xiaomi Products Kutenga
Smartphone Ongororo Xiaomi Redmi Cherechedza 5A
 10 Best Smartphones Kutenga (Kuda / ...
Ongorora Smartphone Vernee M5
LeRee Le 3 Smartphone Review
Ongororo yeSharephone Bluboo S1
 10 Best Gaming Smartphones Kutenga
Kudzokorora Smartphone Ulefone Armor 2
Usada Share with the World!